Khilaafka doorashada Soomaaliya: Mareykanka oo cadeeyay mowqifkiisa mudda kordhinta | Biyoguurenews.com
Home Wararka Khilaafka doorashada Soomaaliya: Mareykanka oo cadeeyay mowqifkiisa mudda kordhinta
Antony Blinken xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka
Dowladda Mareykanka ayaa si kulul uga hadashay go’aankii dhawaan ay golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ay mudda kordhinta ugu sameeyeen madaxwayne Maxamed Cabdulahi Farmaajo.
“Waxaan dib u qiimeyn ku sameyn doonaa xiriirka laba geesoodka ah ee aan la leenahay dowladda federaalka taasi oo ay ka mid tahay la macaamilka dublamaasiyadeed iyo caawinta,” ayaa lagu yiri bayaanka Mareykanka.
Mareykanka ayaa ku hanjabay in ay adeegsan doonaan dhammaan wadiiqooyiinka ay ka mdi tahay cunaqabateyn iyo xannibaado dhanka visaha ama dal-kugalka ah oo la soo rogo.
Dowladda Mareykanka ayaa ugu baaqday dowladda fedaraalka iyo dowladaha xubnaha ka ah in sida ugu dhaqsiyaha badan ay dib ugu laabtaan wadahadalada ayna xal ka gaaraan hananka doorashada.
Bayaanka ayaa waxaa ugu dambeyntii dhinacyada kala duwan uga baaqay in ay is xakameeyaan ayna ka fogaadaan ficilo hal dhinac ah oo sii hurin kara xiisadda, islamarkana minjaxaabin kara geedi socodka dimuqraadiyada iyo hay’adaha Soomaaliya.
Hadalka dowladda Mareykanka ayaa ku soo beegmaya xilli uu xalay madaxwayne Farmaajo saxiixay qaraarkii mudda kordhinta ee ay baarlamaanka ansixiyeen.
Previous articleMasuuliyiinta Jabuuti ayaa Sheegay Tirada Ku Geeriyootay Doon Ku Qalibantay..